गोलबजार तेस्रो मेयर गोल्डकप हुँदै « Janata Samachar
गोलबजार तेस्रो मेयर गोल्डकप हुँदै
प्रकाशित मिति : 17 February, 2020 3:08 pm
सिरहा । गोलबजार तेस्रो मेयर गोल्डकप फागुन ७ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । गोलबजार नगरपालिकाको सहयोग र प्रतिभा संरक्षण क्लवको आयोजनामा हुन लागेको तेस्रो मेयर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता फागुन ७ गतेबाट हुने बताइएको हो ।
प्रतियोगीतामा देशभरका आठवटा टिम भिड्ने भएका छन् । स्थानीय फुटबल खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिभाको रुपमा विकास गर्ने प्रतियोगिताको उद्देश्य रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । गोलबजार नगरपालीकाले फुटबल, करातेलगाएतका खेलहरुलाई महत्वको साथ हेरीरहेको र यस्ता खेलाडीहरुको स्तरोन्नतीको लागि नगरपालिका सँधै सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्रीधर केसीले नगरले १४ लाख ६५ हजार र आयोजकले बाँकी रकम अन्य क्षेत्रबाट जोहो गरी करिब २७ लाख ३ हजार लागतमा खेल सम्पन्न गर्न लागिएको बताउनभयो । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई ३ लाख नगद र दोस्रो हुनेलाई एक लाख ५० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष संजिव महराले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतियोगितामा जलथल एफ.सी. हल्दीवारी, झाप, चर्च ब्वाईज क्लव, काठमाडौं, एफ.सी. मुण्डियाल, हेटाैँडा, बागमती फुटवल क्लव, सर्लाही, २७ नं. वाहिनी अड्डा, चोहर्वा, सिरहा, आयोजक र गोलबजार स्पोर्टस् क्लवको सहभागीता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
गोलबजार तेस्रो मेयर गोल्डकप
वीरगञ्ज । मालवाहक सवारी साधन र पैदलयात्राबाट भारततर्फ जाँदै गरेका ३ सय ५२ जना भारतीय
सिरहा । आगोले पोलेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । गोलबजार नगरपालिका १ की ५५
असहाय तथा विपन्न दुई सय परिवारलाई राहत वितरण
अनिल तिवारी बारा । बाराको निजगढ नगरपालिकामा रहेको बकैया नागमणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले असहाय
दुई युवक कुटपिट गर्ने सशस्त्र प्रहरी हवल्दार निलम्बित
सप्तरी । लकडाउनका समयमा भारतबाट उपभोग्य सामान किनेर आएका दुई युवकलाई कुटपिट गर्ने सशस्त्र प्रहरी